लिडर कसरी बन्ने ? लिडरमा हुनुपर्ने १३ योग्यता पढ्नुहोस् – - Online Media
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: January 7, 2020 (5 Month)
नेतृत्व कला जुनै व्यक्ति को Personality मा अत्यन्त महत्वपूर्ण र खास कुरा हुन्छ । एक सफल र सन्तुस्ट जीवन कसरी जिउने यो कुरामा पनि निर्भर हुन्छ कि के तपाईं भित्र सही नेतृत्व को क्षमता छ या छैन ? यो एक यस्तो योग्यता हो, जसले जब पूर्णता पाउँछ, तब तपाईं को व्यक्तित्व सही ढंगले विकसित भएको हुन्छ।
अर्को शब्दमा यदि तपाईंले कसैलाई आफुसंग सहि ढंगले सहि ठाउँमा लिएर जान सक्नुहुन्छ ,उसको मार्ग दर्शक बन्न सक्नुहुन्छ र असल कार्य गर्नको लागी प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं एक असल लिडर हो । जीवनमा अगाडी बढ़न होस या देश बिकाश गर्न को लागी कठिन परिस्थितिसंग सामना गर्नको लागी तपाईंमा नेतृत्व क्षमता हुन जरूरी छ । यसैले यदि तपाईं एक सफल लिडर बन्न चाहनु हुन्छ भने तपाईंले यी गुणहरु जान्नै पर्ने हुन्छ ।
१)सही निर्णय लिने क्षमता
२)बोल्ने शैली र व्यक्तित्व
एक प्रभावकारी र सफल लिडर बन्नको निम्ति एक अहम शर्त छ – पछिका कुरालाइ समेत विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुनै पर्छ। यस्तो व्यक्ति आफ्नो अदभुत कल्पनाशक्ति र बुद्धिमत्ताको सहायताले पहिला नै भविष्यलाइ योजनाबद्ध गर्न सक्दछ । भिजन भएको Leaders संग प्रत्येक कार्यको लागी एक स्पष्ट योजना त हुन्छ नै, पहिलो योजनाले काम नगरेको अवस्थामा एक जगेडा योजना पनि सधै तयार हुनु पर्दछ । जसले ति थोरै समयमा नै आफ्नो इच्छित लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन , ति केवल अनुमानको आधारमा कुनै पनि काम गर्दैनन्। थोमस कार्लिलको अनुसार “अन्तरदृस्टी बिना नै काम गर्नुले अधिक भयानक असफलात प्राप्त हुन्छ ।” यसैले एक सफल Leader बन्नको लागी कार्यको योजना बनाउनु र योजना अनुसार कार्य गर्नु धेरै जरूरी छ।
लिडरमा आज गरेको कामको असर भोलिको लागि कस्तो हुन्छ? आजको कामले भोलिलाई कति फाइदा हुन्छ यस्ता कुराको अनुमान गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्दछ ।
एक सफल Leader भित्र आत्मविश्वास अनि आशावादी हुनु पर्छ, किन कि आफ्नो क्षमतामा थोरै पनि, मैले गर्न सक्दिन भन्ने खालको बिचारले कुनै पनि व्यक्तिलाइ सफल हुन दिदैन। जो व्यक्तिमा आत्म-विश्वास भरपूर छ र निडर हुन्छ उसलाई कुनै पनि कुरामा नेतृत्व गर्न मुस्किल हुदैन ।आत्मविश्वास नभएका Leader लाइ उसको अधिनमा कार्य गर्नेले लामो समय सम्म लिडरको रुपमा समर्थन गर्दैनन् । आत्म-विश्वासबाट भरिएको लिडरले आफ्नो टिममा पनि आत्म-विश्वास जगाइ दिन्छन र तिनलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न को लागि उत्प्रेरित गर्छन । एक आत्मविश्वास भएको लिडर नै वास्तवमा एक उच्च आशावादी व्यक्ति हुन सक्छन ।
एक राम्रो लीडरमा आफ्नो व्यवहार र आफ्नो बोलीमा पूरा नियंत्रण हुनु पर्छ। जो व्यक्ति आफ्नो व्यवहार, वाणी अनि कार्यलाइ जिम्मेवार र अपेक्षित गरीए अनुसार नियंत्रणमा राख्न सक्दैन, उ अरुलाई सही नेतृत्व पनि दिन सक्दैन, किन कि उसको मर्यादा रहित व्यवहारबाट उसको अधिनमा काम गर्नेहरुपनि मनमानी गर्न थाल्दछन । यसैले आफैमा आत्म-नियंत्रण राख्नुले नै, एक Leader आफ्नो अधिनमा रहेका सबै व्यक्तिहरुलाई सहि मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ ।
गुड न्यूज 24 डट एनपीबाट